Ahoana no fomba hamoronana rindrambaiko web araka ny torolalana SEO?
Ny lanjan'ny fikarohana fikarohana dia manan-danja ho an'ny orinasa rehetra miasa amin'ny aterineto satria io no hany fomba hanentanana ny fampahafantarana ny marika sy hisarihana ny fifamoivoizana. Ny fivoaran'ny tranokala dia misy dingana maromaro. Ny iray amin'ireo dingana ireo dia natokana ho an'ny famoronana tranokala. Na dia izany aza, maro ireo mpivarotra an-tserasera no tsy mahatsapa fa ilaina ny fanatsarana ny fikarohana amin'ny alalan'ny tranonkala. Izany no antony nanery azy ireo hanamboatra ny tranonkala fanorenana taorian'ny zava-misy rehefa mitandrina ny fihenan'ny toerana sy ny fifamoivoizana.
Ny tranonkalanao dia mametraka eo afovoan'ny tontolo misy anao amin'ny tambajotra nomerika ary mamoaka ny hevitry ny olona momba ny marikao. Izany no mahatonga anao ho azonao antoka fa tsara tarehy sy tsara tarehy ary mora ampiasaina sy ambarao. Izany toe-javatra mahazatra izany raha tsy mieritreritra mialoha ny SEO ny tompon-tranonkala ary tsaroany ny momba izany rehefa vita tranokala natao. Ity karazam-piheverana malaza amin'ny Internet ity dia matetika tsy ampy ao amin'ny SEO sy ny sehatry ny varotra nomerika. Ireo tranonkala ireo dia mety ho manintona sy manintona, saingy raha tsy misy fanatsarana manokana dia tsy ho hita ao amin'ny SERP izy ireo.
Amin'ny alalan'ity torolalana fohy ity, dia hianatra ny fomba fampidirana fanavaozana ny fikarohana ao amin'ny tranonkalanao ianao mba hahazoana ny laharana ambony indrindra amin'ny Google. Haneho ny zavatra tokony hoeritreretinao ny hanana tranonkala iray izay naorina ho an'ny tanjon'ny marketing ianao ary manome ny traikefan'ny mpampiasa tonga lafatra.
Fomba hampidirana ny SEO amin'ny tranonkala
Misy antony manan-danja ilainao hampidirina ao amin'ny tranonkalanao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranonkalanao ary hampiditra ny endri-tsoratra search ny tranokalanao ary hampiseho izany amin'ny pikarohana valin'ny fikarohana amin'ny fangatahan'ilay mpampiasa.
Ny rafitra URL
Ny URL anao dia tokony hamaritra ny lohahevitry ny votoatinao mba hanomezana hevitra ny mpitsidika sy ny Google botso na ny mombamomba anao amin'ny fangatahan'izy ireo na tsia. Ny URL-nao dia tokony ho mibaribary sy manoritsoritra ary ahitana ny teny fikarohana sy avo lenta. Manoro hevitra anao aho hisoroka adiresy tsy marim-pototra sy ampahany betsaka satria tsy afaka mitondra sarany amin'ny ezaka SEO anao.
Rehefa mametraka URL lava sy marika amin'ny tenimiafina, dia azo ekena ny mampiasa lindy fa tsy ny fanesoana. Ankoatr'ireo manam-pahaizana momba ny SEO dia manoro hevitra amin'ny fisorohana ny fampiasana ny teny sy ny isa tsy manan-danja amin'ny URL.
Fitetezana ny tranonkala
Ny tranonkalanao dia tokony ho tsotra, mahomby ary mora ampiasaina mba hahazoana antoka fa hahazo ny mpitsidika tranonkala traikefa. Raha ny fitsipika, ny tranonkala dia mametraka ny sari-tanany eo amin'ny tampon'ny pejy Internet na eo amin'ny ilany havia. Na izany aza, mpivarotra an-tserasera sasany no mametraka ny sehatra misy azy any an-kafa, tsy mitadidy ireo mpampiasa tranonkala. Professional webmasters dia manao fanaraha-maso samihafa amin'ny maso sy ny fampiasana mora ampiasaina alohan'ny hanapahana fanapahan-kevitra hametrahana sehatra na pop-up ary raha vao tafiditra ao anaty tranokala.
Tokony ho ampiasaina amim-pitandremana ireo endriky ny endriky ny Flash, ary koa ny fialana, satria mety ho sarotra kokoa ho an'ny mpampiasa azy ireny sy ny mpikaroka mpitsikilika mba hivezivezy sy hizaha ny habaka.Ny rohy mifototra amin'ny rohy dia tokony hanamboatra ireo zavatra ao amin'ny menio ary tsy mahasakana ireo mpitsidika amin'ny tranonkala amin'ny safidy tsy ilaina Source .